Xarumaha caafimaadka ee degmada Jowhar oo la kormeeray – Radio Muqdisho
Xarumaha caafimaadka ee degmada Jowhar oo la kormeeray
An aerial view of flooding in and around Jowhar town, Somalia, on November 12. Heavy rains in Somalia, coupled with recent disputes between clans, has resulted in over four thousand IDPs seeking shelter at an AMISOM military base near the town of Jowhar, with more arriving daily. AU UN IST Photo / Tobin Jones
Mas’uuliyiin ka socota Dowladda Federaalka Soomaaliya iyo kan Maaamulka Gobolka Shabeellaha Dhexe aya kormeeray Xarumaha Caafimadka Magaalada Jowhar si ay u qiimeeyaan Xarumaha caafimaadka magaalada iyo Bulshada Waxa ay u qabtaan.
Wasiir Ku-xigeenka Wasaradda Caafimaadka Dowladda Soomaaliya Cusmaan Maxamed Cabdi Daalo ayaa sheegay in ka wasaarad caafimaad ahaan ay ka war qabi doonaan xaaladaha caafimaadka Magaalada.
“Markii aan halkan imid waxaan u kuur galnay inaan ogaanno xarumaha Caafimaadka Magaalada sida ay yihiin waxaan kormeernay isbitaallada Magaalada waxaana soo ogaannay in ay jiraan tababarayaal caafimaad oo u diyaar san qabashada Adeegyada Caafimaad ee bulshadu u baahan yihiin” Ayuu yiri Cusmaan Daalo.
Maamulka hadda gobolka Shabeellaha Dhexe ka Arrimiya ayaa wada dadaallo loogu jira Horumarinta Adeegyada Bulshada sida Caafimaadka Waxbarashada iyo Dhinacyada Amniga Gobolka.
Ra’iisul wasaare ku-xigeenka dalka oo baaq u diray bahda saxaafadda
Madaxweynaha iyo wafdi uu hogaaminayo oo ku wajahan Jowhar